Abaphathi Bezezakhiwo e-Oklahoma City, Oklahoma
Uhlu Lwezakhiwo: Isiqondisi Sabathengisi Bezezakhiwo Abaphathi Bezakhiwo Oklahoma Oklahoma City
I-RE / MAX Energy Property Management ukuphathwa kwezakhiwo okungcono kakhulu e-Oklahoma City nasezindaweni ezizungezile, Sinikeza indlela ephelele yokuphatha, enakekela izidingo zabanikazi bezindlu nabaqashi. Iqembu lethu lisebenza kanzima ukuvikela inani nokukhulisa ukubuya kwepropathi yokuqasha ...
I-Oklahoma City (), evame ukufushaniswa i-OKC, iyidolobha elikhulu nedolobha elikhulu kunazo zonke lesifundazwe sase-US i-Oklahoma. Isihlalo sedolobha lase-Oklahoma County, idolobha lisesigabeni se-27th phakathi kwamadolobha ase-United States. Isibalo sabantu sikhule silandela ukubalwa kwabantu kwe-2010, kanti inani labantu kulindeleke ukuthi lenyuke laya ku-649,021 ukusuka ngoJulayi 2018. Indawo yedolobha lase-Oklahoma yayinabantu abaningi be-1,396,445, kanti indawo yase-Oklahoma City-Shawnee Combined Statistical Area yayinabantu abahlali base1,469,124, okwenza baba umasipala omkhulu nezindawo ezikhulu zedolobha i-Oklahoma. Imikhawulo yedolobha lase-Oklahoma City inweba ngandlela thile ezifundeni zaseCanada, eCleveland, nasePottawatomie, yize iningi lalezo zindawo ezingaphandle komgogodla Wendawo Oklahoma County zingamapheshana angaphansi komhlaba noma ezivikelekile izindawo zasemakhaya (ezinamanzi). Idolobha libalwa njengedolobha lesishiyagalolunye ngobukhulu e-United States endaweni ephelele lapho kufaka phakathi izindawo ezihlanganisiwe zedolobha; uyidolobha lesibili ngobukhulu e-United States endaweni ephelele, ngemuva kweHouston, lapho ingafaki amadolobha ahlanganisiwe. Ilele esifundeni saseGreat Plains, i-Oklahoma City inemakethe eyodwa yemfuyo enkulu kunazo zonke emhlabeni. Uwoyela, igesi yemvelo, imikhiqizo kaphethiloli kanye nezimboni ezihlobene nazo kungumkhakha omkhulu womnotho wasekhaya. Idolobha liphakathi kwensimu kawoyela esebenzayo futhi i-oyrey dericks ichaza izizathu ze-capitol. Uhulumeni wobumbano usebenzisa izisebenzi eziningi eTinker Air Force Base noMike Monroney Aeronautical Center eMnyangweni Wezokuxhumana (lezi zindawo ezimbili zinamahhovisi amaningi e-Federal Aviation Administration kanye ne-Enterprise Service Center, ngokulandelana). I-Oklahoma City iku-I-35 Corridor, okungezinye zezindlela zokuqala zokuhamba eningizimu zingena eTexas neMexico nasenyakatho zibheke eWichita naseKansas City. Itholakala esifundeni saseFrontier Country esifundeni, indawo esenyakatho-mpumalanga yedolobha isendaweni yemvelo eyaziwa ngokuthi iCross Timbers. Idolobha lasungulwa ngesikhathi se-Land Run ye-1889 futhi lakhula laba yisibalo sabantu abangaphezu kwe-10,000 kungakapheli amahora ukusungulwa kwalo. Leli dolobha bekuyisigameko sokuqhuma kwebhomu le-19 ngo-Ephreli 1995, e-Alfred P. Murrah Federal Building, lapho kwafa khona abantu be168. Kwakuwukuhlaselwa kwabashokobezi okubulala kakhulu emlandweni wase-United States kuze kube nokuhlasela kukaSeptemba 11, i-2001, futhi kuseyisenzo esibi kakhulu sobuphekula basekhaya emlandweni wase-US. Kusukela kugcinwe amarekhodi wesimo sezulu, i-Oklahoma City ihlaselwe yiziphepho eziqinile eziyishumi nantathu; Eziyishumi nanye zalezi zigameko zabalwa i-F4 noma i-EF4 esikalini seFujita ne-Enhanced Fujita, kwathi ezimbili zikalwa nge-F5 noma i-EF5.Since 2008, i-Oklahoma City ibe sekhaya leNational Basketball Association (NBA) Oklahoma City Thunder. imidlalo yasekhaya eChesapeake Energy Arena.